Home Wararka Khalalaasii Boosaaso oo aan wali xal kama dambeeysa laga gaarin
Waxaan wali xal loo helin khlalaasihii ka dhacay Boosaaso. Kulamo ku saabsan xal u helidda arrinta PSF iyo xukuumadda ayaa weli ka socda magaalada Boosaaso. Qaar kamid ah Isimada Puntland iyo mas’uuliyiin hore ayaa Boosaaso u jooga xallinta khilaafka labada dhinac ee PSF iyo dowladda.
Guddoomiyaha Baarlamanka iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda Puntland ayaa sidoo kale ku sugan Boosaaso. Kulamadaas oo socda mudda ku dhow laba todobaad haddana weli warbixin lagama siin bulshada islamarkaana lama sheegin natiijo ka soo baxday.
Previous articleDowlada Imaaraadka oo aan ka jawaabin raaligalinta Rooble & sii deynta lacagtii laga haystay
Next articleWaa maxay sababta uu Rooble dib ugu fasaxay isticmaalka UN-Terminaal?
Shabab oo gudaha u galay xarunta laba wasaaradood iyo dagaal ka...
RW Talyaaniga ayaa kusoo dhaweeyay Airport Silvia Romano oo laga soo...